उदयपुरको भुल्केमा कोरोनासँगै ठेउलाको त्रास ! « News24 : Premium News Channel
काठमाडौं, १७ वैशाख । मुलुकभरका कोरोना भाइरस संक्रमितमध्ये आधाभन्दा बढी एकै गाउँमा देखिएपछि चर्चामा आएको उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका—३, भुल्केमा ठेउला (चिकन पक्स)को संक्रमण बढेको छ। हालसम्म ५ जनामा ठेउला देखिएको छ।
भुल्केमा २८ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको पुष्टि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको थियो। कोरोना परीक्षणका लागि गएको स्वास्थ्य टोलीले परीक्षणका क्रममा ठेउलाको संक्रमण बढेको जनाएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले भुल्के क्षेत्रमा ५ जनामा ठेउला संक्रमण देखिएको बताए।
सुदूरपश्चिमका क्वारेन्टाइनमा औलो संक्रमण देखिएको साता नबित्दै उदयपुरमा ठेउला देखिएपछि स्वास्थ्य अधिकारीले कोरोनासँगै अन्य सरुवा रोगतर्फ पनि सतर्कता देखाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका छन्। भारतबाट आई सुदूरपश्चिमको क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका १५ जना व्यक्तिमा औलो देखिएको थियो। लामखुट्टेको टोकाईबाट औलो रोग लाग्छ। औलो र ठेउला गर्मी मौसममा देखा पर्ने गरेको छ। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा छ ।